Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Atalanta ee Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, ayaa inteeda badan waxaa ku gacan sarreysay Atalanta, iyadoo Juve qeybti hore oo dhan aysan xitaa hal sigin shabaqa Atalanta.
Saddexda gool ee ay Atalanta uga reebeen Juve koobka Italia,labo ka mid ah waxay dhaliyeen qeybti hore ee ciyaarta waliba laba diqiiqo gudahdood daqiiqadihii 37-aad iyo 39-aad waxaana kala dhaliyay Timothy Castagne iyo Duvan Zapata.
Goolka sadexaad oo yimid daqiiqadi ugu danbeysay ciyaarta waxaa raacsaday Zapata oo 10-ki kulan ee ugu danbeeyay Atalanta u dhaliyay 17 gool.
Juve iyada ayaa qaadeysay koobka ay hadda ka hartay shanti sano ee lasoo dhaafay.
*Dhanka Kooxda Roma ayaa guuldarro qaraar kala soo laabatay magaalada Florence kaddib marki ay kooxda Fiorentina dhabarka u soo saariyay 7 gool.
Ciyaarta oo ku dhamaatay 7-1 waxaa saddex ka mida goolasha u saxiixay Fiola, laacibkooda Federico Chiesa, waxaa isna laba gool dhaliyay wiilka macalinka kooxda Atletico Madird Giovanni Simione, halka goolasha kale ay kala qeybsadeen Luis Muriel iyo Marco Benassi.
Waa marki lixaad oo ay Roma la kulanta guuldarro tanoo kale ah, marki ugu danbeysay ee laga dhaliyo 7 gool waxay aheyd sannadki 2014-ki markaas oo ay kusoo tumatay kooxda Bayern Munich.
Caawa Lazio ayaa waxay fooda isdari doonaan Inter. Cidii badisana waxay is arki doonaan wareega semi-finalka kooxda Milan oo talaadadi 22-0 uga badisay Napoli. Fiorentia waxay isku aadeen Atalanta.